Ndụ Obodo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ndụ mpụga obodo
Esi zụta obere ọkụkọ
Ihe na 07.11.2018
Ọtụtụ ụmụ amaala na-enwe obi ụtọ ịnọ n'oge okpomọkụ n'oge ezumike ha. Ghaa ogige, na-elekọta mkpụrụ osisi. Ọtụtụ ndị nwere ọchịchọ ịkụkọ ọkụkọ maka oge okpomọkụ, iji nweta ihu ọchị na-atọ ụtọ, ...
biko zaghachi onye zụtara ụra okooko osisi na osisi sitere na Esipova L. A. M nyere iwu ka ego buru ibu, ana m atụ egwu na a ga-eduhie m.
biko zaghachi, ndị zụtara ụyọkọ nke okooko osisi na osisi sitere na Esipova L. A. M nyere iwu ka ego buru ibu, ana m atụ egwu na a ga-eduhie ha mgbe niile mgbe 100% prepayment
Mkpụrụ "Chọọ", "Aelita", "Gavrish", wdg - nke kachasị mma? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mkpụrụ ndị ahụ bụ ifuru, oleezi ndị ka mma ime?
Mkpụrụ "Chọọ", "Aelita", "Gavrish", wdg - nke kachasị mma? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mkpụrụ ndị ahụ bụ ifuru, oleezi ndị ka mma ime? Aelita weghaara ahia ahụ, naanị ihe anyị na-ere gavrish, na ...
Actinidia. Ezigbo ndi oru ugbo, ònye n'ime unu meworo ka o too? Ị etolitela nnukwu edemede? Kedu ka ị si elekọta ya?
Actinidia. Ezigbo ndi oru ugbo, ònye n'ime unu meworo ka o too? Ị etolitela nnukwu edemede? Kedu ka ị si elekọta ya? Ana m eto 7 afọ actinidia Kolomikta. Tightly na-eto eto, na ikpeazụ di na nwunye ...
Kedu ihe bụ aphids?
Kedu ihe bụ aphids? pesti na-eri nri aphid, obugh aphids. Aphid bụ ntanye nke na-aṅụ aṅụ ruo 2 mm nke nwere agba dị iche iche nke agba (agba, ọbara ọbara, nwa ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). O yikarịrị ka aphid. ...
Kedu esi chebe sọrel site na mbuso agha 3-4 mm na-acha ọkụ ọkụ? Enweghị onwu. Rie niile sọrel.
Kedu esi chebe sọrel site na mbuso agha 3-4 mm na-acha ọkụ ọkụ? Enweghị onwu. Rie niile sọrel. Otu n'ime ọrịa nkịtị nke sọrel bụ downy mildew. Iji gbochie ọrịa a ...
esi eji mkpụrụ osisi ginger na-arịa ọrịa shuga
otu esi eji mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie maka ọrịa shuga Nke a bụ ihe Tamara Yuranskaya, herbalist na-adụ ọdụ: “A họọrọ m mkpụrụ maka mbido uhie (na-agha mkpụrụ saffron), ahịhịa ewu (galega) na centaury. Ọzọ, M na-eji ...
Kedu ka ngwa ngwa na-eto eto? Ọ bụrụ na iwere obere 20, n'ihi ihe ụfọdụ, nnukwu 1.5 nke a kụrụ n'afọ ahụ enweghị mgbọrọgwụ?
kedu ka ị ga - esi mee ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị were obere obere 20cm, n'ihi ihe ụfọdụ n'afọ ahụ, ndị buru ibu kụrụ 1.5m enweghị mgbọrọgwụ? Thuja bụ conifer; conifers niile, ma e jiri ya tụnyere osisi siri ike, gbanye mkpọrọgwụ nke ukwuu. Ya mere, oge mmanye mgbe odida - ...
Ọ bụ eziokwu na mkpụrụ oliv adịghị adị, na mkpụrụ oliv ndị ahụ anyị na-ere n'ụlọ ahịa, na-ese?
Ọ bụ eziokwu na mkpụrụ oliv ojii adịghị n’ụdị okike, na oliv ojii ndị ahụ a na-ere n’ebe anyị na-ere ahịa na-acha? A na-akpọ oliv ojii na-acha oji “mkpụrụ oliv ojii,” na mkpụrụ oliv…
Kedu ka osikapa si eto? http://ru.wikipedia.org/wiki/Rice Rice (Latin ma ọ bụ # 253; za) bụ ụdị nke mkpụrụ osisi herbaceous kwa afọ na ezinụlọ ọka; omenala ọka. Mbụ: Okwu osikapa pụtara na Russia nanị na njedebe nke narị afọ nke 19, ịbụ ihe mmebi ...
Fennel na dil dị otu?
Fennel na dil dị otu? fennel na dil, chervil, cilantro, cumin, anise si n'otu ezinụlọ. Fennel na-amalite na scape. Nri elu na osisi. Dill dị iche na eziokwu na ...
Kedu ihe bụ ọka ọka?
Kedu ihe bụ ọka ọka? Mkpụrụ nke àgwà ala, nke a chọrọ maka nri anụ (ịnyịnya, dịka ọmụmaatụ). ọ bụ ọka na-adịghị adabara ihe oriri ụmụ mmadụ na-emetụta n'ihe gbasara mkpụrụ ndụ, ma ọ dị mma maka nri ụmụ anụmanụ ...
Tii Roses - nso ke agba? Ọ bụrụ na o kwere omume - foto.
Tii Roses - nso ke agba? Ọ bụrụ na o kwere omume - foto. Tii na-acha odo odo. Foto C. Semina tii bụ agba dị n'etiti odo odo na piich. Pastel Smell pụrụ iche! M hụrụ n'anya ...
Kedu ka esi eto tulips n'ime ite?
Kedu ka esi eto tulips n'ime ite? Tulips anaghị achọ nnukwu ite. Ụta na dayameta nke 13 dị mma: lee ka ụwa ga-ewepụ, ájá. Maka ngwakọta were 30% sod sod, 40% humus, na ...
Esi ekpuchi Roses maka oyi?
Esi ekpuchi Roses maka oyi? Best spruce spruce alaka! Ee, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị kwuru kpọmkwem ebe ị bi! Dịka ọmụmaatụ, ebe a, na Primorsky Krai, m prunes Roses, na-ahapụ 10, hụ ...
Ọ dị onye kụrụ tomato iche - Mystery na Flash? Kwuo echiche gị
Anyone nweela onye kụrụ mkpụrụ tomato - kọwaa ilu na Flash? Kee echiche gị banyere ọkụ ọkụ kụrụ. isi ihe adịghị ọsọ ịgha mkpụrụ seedlings, ọ na-eto ngwa ngwa, ma ọ bụghị, ọ ga-anyụ ma gbanye mkpọrọgwụ njọ. nke a…
kedu ụdị ugu na uto nke melon na uto nke painiapulu nwere ike itolite ya. x
kedu ụdị elekere na anụ ụtọ nke melon na ụtọ nke painiapulu nwere ike toro site na onye mbido na s. x Ugbo kacha ụtọ bụ nutmeg. Mkpụrụ nke ugu a abụghị naanị ụtọ, kamakwa nnukwu ...
LUK-SEVOK. Kedu ọkwa na mkpụrụ akwụkwọ kacha mma? Maka ala ịta ahịhịa. Daalụ.
LUK-SEVOK. Kedu ọkwa na mkpụrụ akwụkwọ kacha mma? Maka ala ịta ahịhịa. Daalụ. Stuttgarthen abụghị osibasị dị nkọ. Nkịtị. Dị ka Strigunovsky. Enweghị obi ụtọ na eyịm acha uhie uhie na ọcha. Ma, ọ hụrụ ibe ya n'anya. N'afọ ahụ ...
Kedu ụdị dil iji họrọ? E nwere ọtụtụ n'ime ha ugbu a, anya na-agba ọsọ site na nnukwu nhọrọ. Ma ọ bụ ma eleghị anya ọ dịghị ihe dị iche?
Kedu ụdị dil iji họrọ? E nwere ọtụtụ n'ime ha ugbu a, anya na-agba ọsọ site na nnukwu nhọrọ. Ma ọ bụ ma eleghị anya ọ dịghị ihe dị iche? M zụtara ọtụtụ mkpụrụ osisi dill. N'afọ ahụ, ọ bụ ...
SOS! Olee otú iji zoputa Gladiolus bulbs n'ihu kere si thrips?
SOS! Kedu otu esi echekwa gladiolus bulbs si thrips tupu akuku? Igwe mmiri na-ekpo ọkụ maka eyịm V. PAVLOV N'oge mgbụsị akwụkwọ, ị gwuru oriọna nke gladioli, kpochaa ya ma tinye ya na nchekwa. Wepụla asụ ude - ruo mgbe oge opupu ihe ubi ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,601.